Shiinaha Soosaarayaasha Qaybta Gawaarida iyo alaabada | KAIHUA
System Nidaamka Dibadda
Xalka iyo sameynta caaryada ee nidaamka banaanka gawaarida sida bumpers, grille, dhoobada dhoobada iwm; nidaamka gudaha sida guddiga qalabka, albaabka, tiirka iwm; Nidaamka qaboojinta sida shround, marawaxadda, haanta biyaha iwm.
Shirkaddu waxay taageertaa gawaarida adduunka ee caanka ah ee OEM sida McLaren iyo gawaarida kale ee isboortiga iyo Tesla, iyo sidoo kale Jarmal, Faransiis, Jabbaan, iyo Mareykan. Waxay sidoo kale ka soo jeeddaa Shiinaha SAIC, Geely, Great Wall, Guangzhou Automobile, BYD, iwm. Calaamadaha gawaarida ee Shiinaha waa calaamado wada jir ah sida FAW-Volkswagen, Beijing Benz, Shanghai GM, Dongfeng Nissan, Dongfeng Renault iyo Shenlong Automobile, waana alaab-qeybiyeyaasha heerka koowaad sida Faurecia, Pio, Yanfeng, Echi, Magna iyo wixii la mid ah. U dhigma
O Global OEM:
V Shirkad Wadaag ah:
Lier Alaab-qeybiyaha Koowaad:
Faa'iidada: yaree qiimaha caaryada iyo qiimaha wax soo saarka.
Shaqaalaha Kaihua waxay u hoggaansamaan "dadka u janjeedha, ku guuleysta tayo, hal-abuurnimo isdaba-joog ah, maareyn waarta" falsafadda ganacsiga, si adag u xakameysa "tayada, waqtiga iyo qiimaha", dhammaantood waxay u qaadaan macaamiisha inay tahay xarunta. Kaihua waxaa ka go'an inay noqoto mid si fiican u iibiya caaryada adduunka oo dhan.
Saldhigga Huangyan wuxuu ku fadhiyaa aag 40,000 mitir murabac ah, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 500 oo shaqaale ah isla markaana soo saaraan qiyaastii 1,500 oo wasakh ah sanadkiiba. Waxay leedahay waaxda Saadka, Qeybta Gawaarida, Qeybta Qoyska, Qalabka iyo Qeybta Caafimaadka, oo ku takhasusay soo saarida qashinka, boodhadhka, miisaska banaanka iyo kuraasta, sanaadiiqda, sanduuqyada wax lagu keydiyo, qaboojiyaha, qaboojiyeyaasha iyo wasakhda kale. 80% caaryada waxaa lagu iibiyaa dibada, inta badan waxaa ka mid ah GARDENLIFE, GRACIOUSLIVING, RIMAX, SMARTFLOW, MAOROPLASTICS, STARPLAST, iwm sumado madax-bannaan. 60% caaryada waxaa loo dhoofiyaa in kabadan 60 wadan ama gobalo sida Europe, North America, South America, Asia, iwm.
Saldhigga Sanmen wuxuu daboolayaa aag 36,000 mitir murabac ah oo ay la socdaan in ka badan 350 shaqaale ah, wuxuuna soo saaraa in ka badan 600 nooc oo wasakh ah sanadkiiba. Waxay ku takhasustay wasakhahaasi cirbadaha balaastigga ah ee loogu talagalay qaybaha gawaarida sida bambooleyda baabuurta, xayndaabyada, laambadaha iyo qaybaha kale ee nidaamka dibedda; muraayada gawaarida, albaabka albaabka iyo qaybaha kale ee nidaamka qurxinta gudaha; jir dabaysha, daab dabaysha, flume iyo qaybo kale nidaamka qaboojinta. Waxay inta badan siisaa wasakhahaasi iyo adeegyo si wanaagsan loo yaqaan noocyada gawaarida sida GM, FORD, VW, BMW, BENZ, Peugeot, RENAULT, Magna, FIAT, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, iyo shirkadaha baabuurta ee caanka ah sida IAC, PO, Faurecia, Viston, BOSCH, BEHR, Valeo iyo Denso. 70% wasakhahaasi waxaa loo dhoofiyaa in kabadan 30 dal ama gobol sida Europe, North America, South America, Asia iyo iwm.
Hore: Qeybta Qoyska
Xiga: Qeybta Saadka